Abavelisi kunye nabaXhasi beSitishi se-AC EV China Isikhululo sokutshaja seV EV
Umbane wezorhwebo OCPP 1.6Jason 2.0J Iyahambelana 22kw Smart EV Isikhululo sokutshaja ngokukhawuleza
Igama leModeli JNT-EVCP2-07C2S-00 JNT-EVCP2-22C2S-00 yokuNikezela ngoNikezelo lwamandla 1P + N + PE 3P + N + PE Rated Voltage 230V AC 400V AC Rated Current 64A 64A Frequency 50 / 60Hz 50 / 60Hz Output Output Voltage 230V I-AC 400V AC ephezulu yangoku ye-2x32A 2x32A ilinganiselwe amandla 2x7kW 2x22kW Umsebenzisi Isinxibelelanisi sokutshaja Isixhumi T2 / T2S socket Ukuvalela intsimbi kwalenza ngentsimbi yasekhohlo / Ekunene Iphaneli yeParcarbonate ye-LED Isibonisi esiluhlaza / esimthubi / esibomvu se-LCD 4.3, isikrini seRFID Reader ...
I-Ac 2 * 22kw 64A i-EV yombane weBhetri yeeNdleko zeSitishi seNtengo ye-Ev Charger
Igama leModeli JNT-EVCP1-07C2S-00 JNT-EVCP1-22C2S-00 yokuNikezela ngoNikezelo lwamandla 1P + N + PE 3P + N + PE Rated Voltage 230V AC 400V AC Rated Current 64A 64A Frequency 50 / 60Hz 50 / 60Hz Output Output Voltage 230V I-AC 400V AC ephezulu yangoku ye-2x32A 2x32A ilinganiselwe amandla 2x7kW 2x22kW Umsebenzisi Isinxibelelanisi sokutshaja Isixhumi T2 / T2S socket Ukuvalela intsimbi kwalenza ngentsimbi yasekhohlo / Ekunene Iphaneli yeParcarbonate ye-LED Isibonisi esiluhlaza / esimthubi / esibomvu se-LCD 4.3, isikrini seRFID Reader ...
Chwetheza i-2 16A 11kw EV itshaja yokutshaja imoto
Umbutho wethu ujonge ukusebenza ngokuthembekileyo, sisebenzela bonke abathengi bethu, kwaye sisebenze kwitekhnoloji entsha kunye nomatshini omtsha ngokuqhubekayo kuMenzi weChina 62196-2 Ukutshaja iitishi ze-EV ngohlobo 2 lwePlagi 11kw, Ishishini lethu ligcina ishishini elikhuselekileyo nelisandi lihlanganiswe yinyaniso kunye Ukunyaniseka ukunceda ukugcina unxibelelwano lwexesha elide nabathengi bethu.
I-SAE i-J1772 yetshaja yemoto yetshaja ye-32A eneSatifikethi se-ETL
Ukubonelela nge-OEM kwitshaja yase-China, itshaja yemoto yombane ene-LCD, inkampani yethu ibeka amasebe aliqela, kubandakanya isebe lemveliso, isebe lezentengiso, isebe lolawulo lomgangatho kunye neziko leenkonzo, njl. kuphela ukufezekisa imveliso ekumgangatho ophezulu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, zonke izisombululo zethu ziye zahlolwa ngokungqongqo ngaphambi kokuthunyelwa. Sisoloko sicinga ngombuzo kwicala labathengi, kuba uyaphumelela, siphumelela!
Ukuthengiswa okuTshisayo kweTshayina SAE J1772 Isikhululo sokutshaja kwakhona sohlobo lweCandelo 1
Intengiso eshushu yeChina SAE J1772, Isitishi sokutshaja kwakhona, Umgangatho ogqwesileyo uvela ekubambeleleni kwethu kuzo zonke iinkcukacha, kwaye ulwaneliseko lwabathengi luvela kukuzinikela kwethu ngokunyanisekileyo. Ukuthembela kubuchwepheshe obuphambili kunye nodumo lweshishini ngentsebenziswano elungileyo, sizama konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeenkonzo ezisemgangathweni ngakumbi kunye neenkonzo kubathengi bethu, kwaye sonke sikulungele ukomeleza ukutshintshiselana nabathengi basekhaya nabangaphandle kunye nentsebenziswano enyanisekileyo, ukwakha ikamva elingcono.
Ibhokisi yokutshaja ye-EV kwitshaja yeemoto zombane 40A Uhlobo lwe-1 Iplagi
Itshaja edibeneyo ye-EVC10 EV yeyona tshaja yethu intsha, ekhawulezayo kunye nephambili kwinqanaba 2 lasekhaya, ukutshaja ukuya kuthi ga kwi-50 amps kunye nokudibanisa ukuya kwi-37 yeekhilomitha kuluhlu lokuqhuba ngeyure nganye yokutshaja. Isikhululo sokunyusa i-EVC10 EVSE singafakelwa ukuhlawulisa ii-amps ezili-16 ukuya kuma-50 amps, ukuvumela abaqhubi ukuba bakhethe isantya esifanelekileyo kubo nakumbane wamakhaya abo. Indawo yokutshaja kawonke-wonke inokufakwa nangowuphi na umbane, ngaphakathi okanye ngaphandle, ukutshaja nge-16A ukuya kwi-50A, kwaye iza nentambo yokutshaja eyi-18/25-yeenyawo kunye nokuba yiplagi ye-NEMA 14-50 okanye ye-6-50.
Yenza iYunithi yetshaja ye-EV esemgangathweni yaseMelika yeeMoto zombane ngohlobo 1
Umgangatho we-China wase-China SAE i-J1772, Uhlobo lwe-1 Plug, Sinethemba lokuba nolwalamano lwexesha elide kunye nabathengi bethu. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso kunye nezisombululo zethu, nceda ungathandabuzi ukuthumela umbuzo kuthi / igama lenkampani. Siqinisekisa ukuba unokwaneliseka ngokupheleleyo ngezona zisombululo zethu!
Uhlobo lweSocket 2 32A 22kw Isigaba esithathu se-EV Ukutshaja iziBonelelo ze-EV kwitshaja yeZithuthi zombane
Quots for China EV Ukutshaja Point, EV Ukutshaja Infrastructure, Sineqela ogqwesileyo ukubonelela ngenkonzo yobungcali, impendulo ekhawulezileyo, ukuhanjiswa kwangexesha, Obusemagqabini ubunjani kunye nexabiso elifanelekileyo kubathengi bethu. Ukwaneliseka kunye nekhredithi elungileyo kuye wonke umthengi yeyona nto iphambili kuthi. Sijonge ngokunyanisekileyo ekusebenzisaneni nabathengi kwihlabathi liphela. Siyakholelwa ukuba sinokwanelisa kunye nawe. Siyakwamkela ngokufudumeleyo abathengi ukuba batyelele inkampani yethu kwaye bathenge iimveliso zethu.